Nzọụkwụ 8 Maka iwulite peeji nke ọdịda bara uru | Martech Zone
The ọdịda page bụ otu ntọala nke ga - enyere ndị ahịa gị aka ịnyagharịa na njem ndị ahịa ha. Ma gịnị kpọmkwem ka ọ bụ? Karịsịa, olee otu ọ ga - esi mee ka azụmahịa gị baa uru?
Iji mee nkenke, an irè ọdịda peeji Ezubere iji mee ka ndị ahịa nwee ike ime ihe. Nke a nwere ike ịbụ ịdenye aha na listi email, denye aha maka mmemme na-abịanụ, ma ọ bụ zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ihe mgbaru ọsọ mbụ nwere ike ịdị iche, nsonaazụ ya bụ otu. Nke ahụ bụ ịgbanwe onye ahịa ka ọ bụrụ onye ahịa na-akwụ ụgwọ.
Ugbu a na anyị akọwaala ihe ihu ọdịda bụ, ka anyị kwuo maka ihe mere ya ji bụrụ gbara ọkpụrụkpụ web imewe ngwọta. Ndị a bụ usoro ị nwere ike ịgbaso iji mee ka ihu ọdịda gị ghara iguzogide.
Kwụpụ 1: Kọwaa ndị na-ege gị ntị
Tupu ịmalite ide, ị kwesịrị inwe echiche doro anya banyere onye ndị ị na-ege ntị. Mepụta ndị ahịa site na ịnye ya ụfọdụ njirimara dịka afọ, okike, ogo mmụta, ọrụ, ego ọnwa, na ndị ọzọ.
Site na nke a, ị ga-enwe ike ịkọwa ozi gị nke ọma, kwupụta otu ihe mgbu, wee kọwaa uru nke ngwaahịa gị. Mgbe ịkọwapụtara ndị na-ege gị ntị, gaa n'ihu nzọụkwụ ọzọ.
Kwụpụ 2: Jiri Iwu Mmekọrịta
Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-ezo aka na ihe a dị ka agụụ miri emi iji meghachi obiọma mgbe ọ bụla mmadụ mere gị ihe ọma. Ihe nlere efu, akụkọ zuru ezu, ma ọ bụ nyocha ederede ederede dị mfe bụ ụfọdụ n'ime onyinye ndị ụlọ ọrụ na-eji eme ihe n'ụzọ dị irè.
Yabụ ka anyị kwuo na ị na-anwa nweta email nke onye ahịa ma ọ bụ mee ka ha denye aha na listi nzipu ozi. Nwere ike ikwe ha nkwa nkwanye ugwu dị elu iji kpalie ha ime ihe. Ọ bụrụkwa na ị na-enye ha ihe bara uru, ha ga-ewere ya na ihe ị na-enye dị mma karịa.
Kwụpụ 3: Dee isi okwu na isi okwu
A isiokwu bụ isi gị nko na-azụ a ahịa na; isi-ntụgharị nke na-adọrọ uche ha. Okwesiri ime ka isi okwu gi doo anya ma doo anya. Ka ọ dị ugbu a, isiokwu nta na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị iji mee ka onye ahịa nọrọ ma marakwuo.
Mgbe na-ede ma, mgbe nile tọghata gị atụmatụ n'ime a uru. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere smartphone nwere ogologo ndụ batrị, ekwula banyere mAh (milliampere-hour). Kama, kwuo “Binge-lelee ọkacha mmasị gị Netflix ngosi n’otu mgbe.” Zọ a, ị na-agwa etu ngwaahịa a ga-esi metụta ndụ ndị na-ege gị ntị wee dozie isi ihe mgbu na ndụ ha.
Kwụpụ 4: Nye ihe ngosipụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Ngosipụta nke ọha bụ ihe dị mkpa na peeji ọdịda gị ebe ọ na - egosi onye ahịa gị nwere ike ịbido ndị mmadụ na - erite uru na atụmatụ ngwaahịa gị.
88% nke ndị na-azụ ahịa na-atụkwasị obi na nyocha onye ọrụ dịka nkwanye onwe onye.
Ya mere, gbalịa ịnweta nkwenye n'aka ndị ahịa nwere obi ụtọ ma lelee ọnụego ntọghata gị ịrịgo. E kwuwerị, ndị mmadụ na-agbaso ìgwè ehi. Ma mgbe ìgwè ehi ahụ nwere afọ ojuju, ndị ahịa nwere ike ịnwa ịbanye n'ime ihe ahụ iji bụrụ akụkụ nke ahụmịhe ahụ.
Kwụ na 5kwụ XNUMX: Okwu Vistors 'Pain Points na Otu I Si Kwụsị Ha
Ka anyị kwuo na ị na-ere mmemme mgbatị ụlọ maka ndị mbido. Otu ihe mgbu gị na-ekwu ebe a bụ na onye ahịa gị nwere ike ịnwe okwu ntụkwasị obi sitere na ibu ha. Ikekwe ha na-enwe nsogbu dabara na uwe ha ma nke a emetụta ndụ mmekọrịta ha.
Ugbu a, ọrụ gị bụ ịmepụta peeji ọdịda nke gosipụtara isi ihe mgbu a wee kpochapụ ya site na iji ọrụ gị. Isi okwu gi nwere ike iyi ihe dika:
Nweta oke egwu na nkasi obi nke ụlọ gị. Or Kwadebe ụdị osimiri ahụ maka oge ọkọchị.
Nwere ike mgbe ahụ soro a na catchy subheadline:
Emere usoro mgbatị nke ụlọ a iji mee ka ị daa n'emeghị ka ngwaọrụ, ọgwụ, ma ọ bụ njedebe dị elu. Naanị ihe ị chọrọ bụ oge, nkwali, na igweri oge niile.
6kwụ na Directkwụ XNUMX: Direct Visitors To A Call to Action
Mgbe itinye ihe ndị ahụ edechara aha, ọ bụ oge iji mepụta oku gị ka ị rụọ ọrụ. Ọ kwesịrị ịdị mkpụmkpụ, nke a na-ahụ anya ma jiri asụsụ na-eme ka mmadụ kwenye. Ka anyị rapara na mmemme mgbatị ụlọ dị ka ihe atụ.
Kama idozi nsogbu n'okpuru bọtịnụ iji nweta email ha, ị nwere ike ịme ya site na ịsị Jikọọ ndị ọrụ ahụ or Bido gbaa abụba ahụ ọkụ taa. Ikwesiri iji eserese na-adọrọ adọrọ iji duru onye ahịa ozugbo na ịkpọ oku na-arụ ọrụ (CTA). Kedu ihe ọzọ, jiri agba dị iche iji nyere aka eme ka mkpọchi ahụ pụta ìhè.
Kwụpụ 7: Nnwale, Nnwale, Ule… Ihe niile
N'ezie, ị ka kwesịrị ịme nyocha A / B iji mee ka ọnụego mgbanwe gị bawanye. Nwaleenụ ihe niile… si imewe akụkụ, oyiyi, Akara ókwú, akụkọ, isiokwu nta, oyiyi, bọtịnụ, oku na-omume-ihe niile. Logbado usoro atụmatụ ọdịda agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na enweghị usoro nyocha.
Inwale otutu peeji di iche iche na mmadu na ihe ahia bu ihe di uku. Ọ bụrụ na ọ bụ atụmatụ B2B, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọrọ ịnweta peeji ọdịda nke ahaziri maka ụlọ ọrụ ọ bụla ị na-ejere ozi. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ peeji nke ndị na-azụ ahịa na-elekwasị anya, ị nwere ike ịchọrọ ịhazi ọdịnaya na onyonyo site na afọ, okike, ọnọdụ.
Nzọụkwụ 8: Jiri Mpempe Akwụkwọ Ihucha
Mepụta peeji ọdịda dị irè anaghị achọ ọtụtụ mgbalị ma ọ bụ oge mgbe ị nwere azịza peeji nke kwesịrị ekwesị. Ntọala peeji nke ọdịda na-enyere gị aka iwulite ibe ọdịda mara mma nwere ikike ịmegharị, nwalee, ijikọta, na dezie na enweghị mbọ.
Lelee Ntughari, Ọ bụ ihe ngwọta dị mfe iji nweta ọdịda ga-enye gị ike itinye ndụmọdụ sitere na edemede a!
Malite Ọnwụnwa ma ọ bụ Nweta ngosipụta nke Instapage
Site na ndị ahịa nwere ike ibute Fans
Ibe ọdịda dị egwu nwere ike ime ka ọnụego gị gbanwee ma nyere aka mee ka azụmaahịa gị dị ngwa. Site na isoro usoro ndị ahụ edeturu, ị ga-abawanye arụmọrụ nke ihu ọdịda gị site na nbanye ma belata oge ị na-eme ya. Naanị cheta na ị ga-etinye uru karịa ihe ọ bụla ọzọ, ị ga-emekwa ka ndị ahịa gị bụrụ ndị na-agba ọsọ n'oge na-adịghị anya.
ngosi: Martech Zone bụ mgbakwunye nke Ntughari!
Tags: irè ọdịda peejiNtughariọdịda pageimebe peejiọdịda peeji isi okwuọdịda peeji nzọụkwụọdịda peeji nke ndụmọdụisiokwu ntatestimonials